कैलालीमा भेटिईन् यस्ती सुन्दरी मा’ता, उनको यस्तो अनौठो दावी – म,रेका मानिससँग पनि कुरा ? (हेर्नुस् भिडियो) – Ap Nepal
कैलाली । ‘कालिका देवी बोलाउँदा त्यति गाह्रो हुँदैन । तर पितृ बोलाउँदा गाह्रो हुन्छ । कसरी गाह्रो हुन्छ भने जस्तो भएनी म,रेको आ त्माहरु जीnउँदो शरिरमा चढाउनु पर्छ शरीरमा आत्मा चढाउँदा निकै नै गाह्रो हुन्छ ।’
यो भनाई हो कैलाली लम्की चूहा नगरपालिका वडा नं. २ को मोतिपुर भन्ने ठाउँकी माता रितु घिमिरेको । जोसंग पितृ बोलाउने र कालिका देवीलाई बोलाउने शक्ति रहेको छ ।
उनी निकै नै सुन्दर छिन् । उमेर पनि खासै धेरै भएको छैन । यस्ती सुन्दरी माता कसरी बनीन् त भन्ने जिज्ञासा सबैलाई हुनु स्वभाविक नै हो । यस विषयमा उनी भन्छिन्,‘मलाई मेरो ससुराले यो शक्ति दिनु भएको हो ।
एकदिन म मेरो आफ्नै कोठामा यत्तिकै पल्टि रहेकी थिएँ । त्यतिबेला मेरो ससुराको आत्माले मलाई गोबर र अगरबत्ति दिनु भएको थियो । मैले उहाँलाई छोएको महसुस गरें । जब मैले त्यसो गरें त्यसको लगत्तै म ढलें र बे.होस भएँ ।’
मरिसकेको ससुराले आफुलाई यो काम गर्नकोलागी शक्ति दिएको हुनाले आफुले यो काम गरेको माता रितु बताउँछिन् । उनले बिरामी भएर आएकाहरुलाई फुकि दिएर निको बना.उँछिन् भने भविष्यको बारेमा जान्न आउनेहरुलाई भविष्य पनि बताईदिने काम गर्छिन् ।
भिडियोमा नै हेर्नुहोस
Nextकोभि;ड १९ लकडाउन पछी पल शाह कालेज पढ्न जानथाले ! हेर्नुहोस् किन कलेज गए ?? (भिडियो सहित)
अश्लिल फोटो पठाई ब्ल्या, कमेल गरेको अभियोगमा प क्राउ